टिकटक बनाउन फोन नदिएकै कारण १२ बर्षिय बालिकाले गरिन आ’त्म’ह’त्या !(भिडियो) – Taja Khawar
टिकटक बनाउन फोन नदिएकै कारण १२ बर्षिय बालिकाले गरिन आ’त्म’ह’त्या !(भिडियो)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आषाढ २९, २०७८ समय: १८:२७:२२
चितवन जुटपानि स्थित एक परिवारमा निकै नै दु’खद खबर खटेको छ। जहा १२ बर्षिय बालिकाले आ’त्म’ह’त्या गरेकी छिन्।सामाजिक संजाल टिकटकले गर्दा अहिले धेरै मनिसहरुले आ’त्मह’त्या गरेको पाइन्छ। कसैले झु’न्दिएर आ’त्मह’त्या गरेको पाइन्छ भनेकसैले पुलबाट हाम हालेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै १२ बर्षिय बालिका रियाले पनि झु’न्दिएर आ’त्मह’त्या गरेकी छिन्।
सानै उमेर देखि नाच्न मन पराउने रियाले अहिले टिकटक बनाउन नपाएर आ’त्मह’त्या गरेकी हुन्। ठुलो भएपछि राम्रो डान्सर बनेर धेरैपैसा कमाउने उनको इच्क्षा थियो। सानै उमेर देखि डान्स गरेर पछि काट्ट्रुन क्रु संग डान्स गर्ने उनको ठुलो धोका थियो। राम्रो बनेर राम्रोराम्रो टिकटक बनाएर हाल्ने उनको ठुलो शो’क थियो। टिकटक बनाउनको लागि उनि संग राम्रो मोबाइल नै थिएन ,त्यस कारणले उनलेमलाई २० हजारको मोबाइल किनेर ल्याइदिन भनेकी थिइन्।
घरको आर्थिक अवस्था कम भएको हुनाले उनीहरुले मोबाइल किनिदिन सकेनन। नसक्दा रियाले मलाई मोबाइल किनेर दिने भए दिनुहोइन भने म १५ गते झु’न्डि’एर मो’रिदिन्छु भनि आ’वेगमा भनिन र उनले १७ गरे आफ्नो प्रण त्या’ग गरिन। आमाले मैले साउनको ५ गतेसम्म किनिदिन्छु भन हुन्छ भनेकी थिइन् रियाले र आफ्ना साथिहरुलाई मलाई घरमा १५ गते सम्म मोबाइल किनिदिनन भनि म झु’न्दिएरमा’रिदिन्छु भनेकी रहेछिन।
६ कक्षामा पढ्ने १२ बर्षकि रिया सानै भएको कारणले पनि पढाई बिग्रिन्छ भनि घरपरिवारले उनलाई मोबाइल किनिदिएका थिएनन।रियाले आफ्नी दिदिसंग मैले मोबाइल किने भने हामि दिदिबहिनीले धेरै टिकटक भिडियो बनाउने र धेरैपैसा कमाएर बुबाआमालाई पाल्नेसुख दिने भनेकी रहेछिन् । रिया घरकी कान्छी छोरि हुन् ,उनलाई केहि कुराको कमि भयो भने उनले मलाई हेला गरे ,कसैले माया नै गरेननभन्ने सोच्ने गर्थिन। पुरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
Last Updated on: July 13th, 2021 at 6:27 pm